मोदीलाई ओलीको प्रश्न– नेपाली डुबानमा पर्दा मन दुख्दैन ? – Makalukhabar.com
मोदीलाई ओलीको प्रश्न– नेपाली डुबानमा पर्दा मन दुख्दैन ?
काठमाडौं, वैशाख ३१ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई ‘भारतीय बाँधका कारण नेपाली भूमि डुबानमा पर्दा तपाईंको मन दुख्छ कि दुख्दैन’ भनेर सोधेका छन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगको भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाएका बाँधका कारण नेपाली भूमि डुबानमा पर्दा बर्सेनि मानवीयसँगै अर्बौै रुपैयाँ बराबरको धनमाल क्षति हुने गरेको जानकारी गराउँदै यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । मोदी दुईदिने नेपाल भ्रमण गरी शनिबार स्वदेश फर्किसकेका छन् ।